Madaxweynaha Puntland oo magacaabay guddi kasoo talobixiya amniga magaalooyinka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo magacaabay guddi kasoo talobixiya amniga magaalooyinka
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah magacaabay guddi si ay uga soo talobixiyaan amniga magaalooyinka Puntland gaar ahaan caasimada Garoowe.
Guddiga oo ka kooban saddex xubnood ayaa kala ah:
Gen. Bashiir Cabdi Maxamed (Guddoomiye)
Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole (Xubin)
Cabdirisaaq Ciise Xuseen (Xubin)
“Guddiga ayaa sameyn doona qiimeyn iyo kasoo talabixin hannaanka amniga lagu sugo, sidii loo joojin lahaa mukhaadaraadka iyo loona sii horumarin lahaa qosheyaasha amni ee dowliga ah.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada.
Magacaabista ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii u dambeeyay ay magaalooyinka Puntland gaar ahaan Garoowe lagu dilay dad shacab ah, oo intooda badan ay geysteen ciidamo.
Laascaano-(Puntland Mirror) Kulan u dhaxeeyay masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaano ayaa fashil ku dhammaaday, sida ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Kulanka oo ay albaabadu u [...]